Kulan ku saabsan isdhaxgalka Bulshada oo Muqdisho lagu qabtay | Radio Muqdisho
Kulan ku saabsan isdhaxgalka Bulshada oo Muqdisho lagu qabtay
Published on February 21, 2013 by admin · No Comments · 1,361 views
Kulan balaaran oo ku saabsan isdhexgalka Bulshada ayna ka qeyb galeen mas’uulyiin ka tirsan maamulka gobalka Banaadir ayaa maanta lagu qabtay dagmada C/casiis ee gobalka Banaadir.
Kulanka oo qeyb ka ahaa kulamo balaaran oo isdhexgalka bulshada ah oo mudooyinkan ka socday dagmooyinka Gobalka Banaadir ayaa maanta lagu qabtay Dagmada C/casiis ee gobalka Banaadir.
Kulanka ayaa sidoo kale Koob ku aadan isdhexgalka Bulshada lagu gudoonsiiyay kooxda Cayaartooyda kubadda cagta ee waaxda Gaarisa ee dagmada C/casiis kuwaas oo ku guleysatay tartan isdhexgalka Bulshada.
kulanka ayaa waxaa ka qeyb galay guddoomiyaha dagmada C/casiis, guddoomiyeyaasha dagmooyinka Shibis iyo Shangaani, haween iyo qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan dagmadaasi waxaana u jeedada munaasabadan ay aheyd mid koob lagu gudoonsiinayay ciyaartooyda kubada cagta ee dagmadaasi kuwaas oo ku guuleystay koobkii is dhaxgalka bulshada ee loo qabtay dagmooyinka gobolka Banaadir.
Guddoomiyaha dagmada C/casiis C/llaahi Xuseen Xasan oo hadal ka jeediyay goobta ayaa sheegay in uu aad ugu faraxsan yahay koobka ay ku guuleysteen ciyaartooyda dagmadiisa isagoona ugu hambalyeeyay guusha ay gaareen.
Sidoo kale guddoomiyaha xiriirka kubbadda Kolayga Ibraahim Xuseen oo ka hadlay goobta ayaa guddomiyaha dagmada C/casiis ku amaanay sida uu qeybta weyn ugu qaatay hormarinta isdhaxgalka bulshada.
Dhawaan ayey aheyd markii magaalada Muqdisho uu maamulka gobolka Banaadir ku qabtay kulan isboorti kaas oo looga gol lahaa isdhaxgalka bulshada waxaana koobkii la dhigay ku guuleystay dagmada C/casiis ee gobolka banaadir oo maanta la guddoonsiiyay koobka.